5 Zvidzidzo Zvekudzidza Kubva Nhoroondo yaJakobho naEsau | NZIRA DZOKUNAMATA
musha Kurarama nehumwari 5 Zvidzidzo Zvekudzidza Kubva Nhoroondo yaJakobho naEsau
5 Zvidzidzo Zvekudzidza Kubva Nhoroondo yaJakobho naEsau
Nhasi tichadzidza zvidzidzo zvishanu zvekudzidza kubva munyaya yaJakobho naEsau. Jacob naEsau vaive vanakomana vaviri vaIsaka naRibheka. Jakobho aive mufudzi wemombe asi Esau aive muvhimi anotyisa. Ava vanakomana vaviri vaive mapatya uye vakagovana masimba uye hunhu hwakasiyana. Kunyange Rebheka mai vavo vachida Jakobho zvakanyanya, baba vavo Isaka vanoda Esau zvakanyanya. Nyaya yevanakomana vaviri ava ndeyekuti ine Zvidzidzo zvakasiyana kune vese vabereki uye vechidiki vanhu.
Kunze kwekuti Jacob aive nesungano yaMwari pamusoro pehupenyu hwake, zvimwe zvinhu zvakare zvakagumisa chiitiko chekuti iye ave nemakomborero ababa vavo pachinzvimbo chaEsau uyo ​​akazove mwana wekutanga. Mwari akaita chinangwa chake pamusoro pevanakomana vaviri ava. Mwari akataura mubhuku raMaraki kuti Jacob ndinomuda uye Esau ndinovenga. Zvisinei zvisinei nerudo nemutsa waMwari kunaJakobho, kuchine zvimwe zvidzidzo zvinodzidziswa kubva munyaya yavo.
Munhu Anofanirwa Kuva Nekudzora Dumbu Rake
Chimwe chezvinhu chakaita kuti Esau ave mugashiri wemaropafadzo ababa vavo ndechekuti akatengesa udangwe hwake kunaJacob kuti awane ndiro yechikafu. Chinyorwa chiri mubhuku ra Genesisi 25: 29-34 Zvino Jakove wakange abika rupiza, Esau ndokusvika achibva kusango oziya; Esau ndokuti kuna Jakove: Dondiregawo ndiminye zvitsvuku izvo zvakatsvuka, nekuti ndaneta. Ndokutumidza zita rake kuti Edhomu. Jakove ndokuti: Nditengesere nhasi udangwe hwako. Esau ndokuti: Tarira, ndodofa, zvino udangwe uchandibatsirei? Jakove ndokuti: Ndipikire zvino. Ipapo Jakobho akapika kwaari uye akatengesa udangwe hwake kuna Jakobho. "Ipapo Jakobho akapa Esau chingwa nenyemba. Ipapo akadya, akanwa, ipapo akasimuka akaenda. Saka Esau akazvidza udangwe hwake.
Isau akarasa kuziva kuti aive iye mukuru nekuti aive nenzara. Aifanirwa kungozadza dumbu rake nechikafu kupedza nzara yake. Akatengesa udangwe hwake kumunun'una wake Jakobho kuti awane ndiro. Ivo baba vavo Isaka vanogona kunge vasina kuziva kuti izvi zvakaitika riini pakati pevanakomana vavo vaviri, zvisinei, panguva yekupa kukomborerwa kuna dangwe, Jacob akave neropafadzo pachinzvimbo chaEsau. Murume anofanira kuve nekutonga padumbu rake. Nzara haifanire kunge iri kutonga murume.
Hazvishamise kuti bhuku ra 1 Corinthians 6: 13 Zvokudya ndezvedumbu uye dumbu nderezvokudya, asi Mwari achazviparadza zvose zviri zviviri.
Maropafadzo aMwari Haapedze Maitiro
Kuti murume wese ave mukuru muhupenyu pane maitiro anofanirwa kuteverwa uye kana chero murume akasvetuka maitiro, iye akangorebesa nguva yekuzadzikiswa. Izvi zvaive zvakakurisa muhupenyu hwaJacob. Iye zvirokwazvo aive nechikomborero chaMwari, zvisinei, hupenyu hwake hwaive husina kana chinhu chinofanira kunyorwa kumba nezvacho. Akanga achirarama mupenuri uye iye aingova mashoma kudonha kubva kuhurombo.
Chekutanga, Jacob aive mumba maRabhani achishanda semufudzi wemombe. Akashanda kwemakore chete kuti akwanise kuroora Rachel, asi mushure memakore manomwe, akapihwa Leah pachinzvimbo. Aifanira kushandirazve Rakeri mamwe makore manomwe. Zvese izvi zvaive zvekugadzirira Jacob kuti ave murume mukuru. Zvichakadaro, Esau akange ave mukuru kwazvo kunyangwe aive asiri iye mutakuri wechikomborero.
Chidzidzo chiri nyore kubva pane izvi ndechekuti zvinhu zvikuru zvinotora nguva yakaringana kuti zvibatanidze.
Mwari Haavengi Munhu
"Esau akanga asiri mukoma waJakobho here?" ndizvo zvinotaura Jehovha. “Ndakada Jakobho, asi Esau ndakamuvenga. Ndakashandura makomo ake ave renje, nhaka yake ndakaisiya mhungu murenje.
Sezvo zvinopesana nekutenda kwakakurumbira kwekuti Mwari anovenga Esau zvechokwadi, Mwari haavengi chero munhu. Iye ndiye musiki wezvose, angagona sei kuvenga zvaakasika? Ichi chakakurumbira chirevo kubva parugwaro Jacob ndinoda asi Esau wandinovenga kungoziva kuti Mwari anoda Jacob zvakadii uye humbowo hwekuti ndiye mwana wesungano. Zvichakadaro, hazvireve kuti Esau haana kumbobudirira. Muchokwadi, Esau akange ave murume mukuru, mupfumi uye ane simba kwazvo nguva refu Jacob asati awana chinangwa.
Isau akakwanisa kuregerera Jacob nekukasira nekuti aive akachinja. Aive nevaranda vakawanda uye nehuku dzakawanda kupfuura mukoma wake Jacob. Uku ndiko kusimbisa chokwadi chekuti Mwari haavengi chero murume.
Kusangana Na Mwari Kunopindura Vese
Jakove ndokusiiwa oga; zvino murume wakatsutsurudzana naye kusvikira utonga huchitsvuka. Murume paakaona kuti haagoni kumukunda, akabata panhivi dzehudyu yaJacob zvekuti hudyu yake yakamonerwa paaiita mutsimba nemurume uya. Zvino murume wakati: Ndirege ndiende nekuti utonga hwatsvuka. Asi wakati: Handingakuregei muchienda musati mandiropafadza. Murume ndokumubvunza achiti: Zita rako ndiani? Iye ndokuti: Jakove. Ipapo murume uya akati, "Zita rako harichazonzi Jakobho, asi Israeri, nokuti wakarwa naMwari uye navanhu uye wakakunda." Jakove ndokuti: Ndiudzewo zita rako. Iye ndokuti: Sei uchibvunza zita rangu? Ipapo akamuropafadza ipapo. Jakove ndokutumidza zita renzvimbo iyo kuti Penieri; nekuti wakati: Nekuti ndaona Mwari chiso nachiso, asi upenyu hwangu hwaponeswa.
Husiku husati hwaitika Jacob akasangana naEsau mushure memakore mazhinji, chimwe chinhu chinoshamisa chakaitika husiku ihwohwo, akasangana naMwari. Bhaibheri rakanyora kuti akaita mutsimba nemurume kusvikira kuzorora. Chisingazivikanwi pachakaona kuti aisakwanisa kukunda Jacob, akamuteterera kuti amurege aende, asi Jacob akaramba. Jakove akaudza murume uyo kuti: Handingakurege uchienda kunze kwekunge wandiropafadza.
Chinyorwa chakanyora kuti murume akabvunza kuti zita rake ndiani uye akati Jacob, uyo asinganzwisisike akamuudza, zita rako harichazonzi Jacob asi Isreal nekuti wakarwa naMwari uye nevanhu uye wakunda. Husiku ihwohwo Jacob akasangana naMwari uye hupenyu hwake hwakashanduka. Hasha dzemukoma wake Esau dzakadzimwa zvinoshamisa nekuda kwekusangana kwaakaita naJakobho naMwari husiku hwese.
Pane Zvakawanda Kune Zita
Genesisi 32:28 Ipapo murume akati, "Zita rako harichazonzi Jakobho, asi Israeri, nokuti wakarwa naMwari nevanhu uye wakakunda."
Zita remurume rinotakura simba. Kwemakore Jakobho akararama mukutya uye nekufunganya nezvekuti mukoma wake Esau aizoitei kwaari paanosangana naye zvakare mushure mekunge aba ropafadzo yababa vavo. Esau aive apika kuti achazouraya Jacob paanomuona. Zvichakadaro, Jacob, kunyangwe neropafadzo akatadza kuwana kutakura kwehupenyu hwake.
Asi mushure mekunge zita rake rachinjwa kubva kuna Jacob kuenda kuna Isreal, zvaiita sekunge akazova munhu mutsva. Zvese nezvake zvakachinja nguva iyoyo chaiyo. Kunyangwe Esau aive asina imwe sarudzo kunze kwekuita rugare naye.
Previous nyayaKunamata Kunongedzera Kupokana Neyakaipa Nhau uye Matauriro
inoteveraKunamata Points Kuti Uzive Mukana
Minamato makumi matatu Ekutungamira Mukuita Sarudzo
Kunamata Kunongedzera Kudzoreredza Makomborero Akabiwa MuRoto
Namata Rudzi rweTanzania